Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ụdị ndụ kacha mma maka ahụike 2022
Mgbe afọ ndị anyị niile gafeworo (na-ele gị 2020 na 2021) ọ dị ka ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ikweta na ha nwere olile anya dị elu maka 2022. Nanị ịkwaga n'ebe dị anya site n'obi nke ọrịa COVID-19 zuru ụwa ọnụ nke 2020 bụ nnukwu mmalite. ma ọ dị mwute na ọ dịghị onye nwere ike ịchịkwa ijeụkwụ nke ụwa na-alaghachi na nkịtị. Ya mere, anyị niile kwesịrị ịmepụta afọ ojuju na uto nke onwe anyị na 2022 n'agbanyeghị ihe ndị dị na mpụga na-egwu.
Ebe dị mma ịmalite iji hụ na afọ nwere obi ụtọ, nke na-arụpụta ihe, nyocha onwe ya na nke ọganihu nke onwe ya na-eme ka àgwà ndụ dị mma; n'ihi na mgbe ị na-arụ ọrụ na onwe gị, ọ bụ nnọọ na otú ahụ siri ike ịbụ submerged n'okpuru ibu nke ọnọdụ si gị njikwa. Kama, ị nwere ike ilekwasị anya na ihe ọma niile dị na ndụ gị, usoro ị na-agbaso nke na-ewetara gị ahụike na afọ ojuju, yana uto onwe onye ị na-aga.
Mgbe a jụrụ ndụmọdụ ha kacha mma gbasara ụdị ndụ kacha mma maka afọ 2022 dị mma, ndị isi a na ndị nwe azụmaahịa nyere ndụmọdụ nghọta. Yabụ jide onye na-eme atụmatụ gị wee detuo ihe gbasara ụdị ndụ ndị isi azụmaahịa na-aga nke ọma na-atụ aro maka afọ ka mma ma na-egbuke egbuke n'ihu.
Lekwasị anya na Ihe Dị Mma
Onye rụpụtara ụlọ ọgwụ na-ahụ maka ihe nfụkasị n'ụlọ Cleared Teknụzụ tụlere mmetụta bara uru nke ukwuu nwere ike inwe na ọnọdụ ịdị mma gị. Ọ na-atụ aro na ebe mbụ ị na-ele anya iji mee mgbanwe ndụ dị mma dị n'ime site n'ịgbanwe echiche gị site na adịghị mma gbara gị gburugburu gaa na nke ziri ezi.
"Ndụmọdụ kacha mma maka ime mgbanwe ndụ dị mma maka afọ na-abịa bụ ịhọrọ ilekwasị anya n'ihe ọma ndị gbara gị gburugburu. N'oge ogbo nke ndụ anyị na-na mkpokọta, ọ pụrụ iyi mfe karịa mgbe ọ bụla tupu ịhụ negativity na egwu n'ebe nile gburugburu gị, ma echefula banyere ihe ọma niile na-eme ma na ụwa na nnukwu na gị onwe ndụ. Nke a dabara na tiori na ị na-ahụ ihe ị na-elekwasị anya; N'ụzọ sayensị, akụkụ ụbụrụ gị na-ahụ maka ihe a ka a na-akpọ Reticular Activating System, mana ọbụlagodi na enweghị okwu sayensị, eziokwu ka na-egosi na anyị na-ekepụta eziokwu nke ụwa gbara anyị gburugburu site n'ịghọta ihe anyị lekwasịrị anya na ya. Ọ bụrụ na ị hapụ onwe gị ka ị banye n'ime mgba na ihe ọjọọ ndị gbara gị gburugburu, ha ga-eweghara ndụ gị. Ma ọ bụrụ na i lekwasị anya n'ezi ihe, echiche gị ga-agbanwe ma ị ga-enwekwu obi ụtọ na ahụ iru ala. Ị ga-eteta nke ọma kwa ụbọchị wee họrọ positivity. Ọ dịghị mfe ma ọ ga-eme ka a nnukwu ihe dị iche na otú ị na-ahụ (ma ya mere dị na) ụwa, "na-ekwu Dr. Payel Gupta, CMO & Co-guzobere nke A kpochapụrụ.
Na-emega ahụ kwa ụbọchị
Ugboro ole ka a gwara gị gbasara uru mgbatị ahụ dị? O nwere ike ịbụ ọtụtụ ihe, mana ka ị na-anụ ihe n'ozuzu pụtara na ọ bụ ihe i kwesịrị ige ntị n'ezie. Mmega ahụ kwa ụbọchị na-eduga n'ọtụtụ uru ahụike, gụnyere ihi ụra ka mma, ume ka mma, njikwa ibu, mbelata ọbara mgbali, na obi siri ike.
"Ana m eme ya ihe mgbaru ọsọ nke onwe m ịhụ na m na-emega ahụ kwa ụbọchị. Ụbọchị ụfọdụ na-arụsi ọrụ ike na ịchọta oge imega ahụ siri ike mana m ka na-ewepụta oge ịkwaga. 'mmega ahụ' apụtaghị ịga mgbatị ahụ ma ọ bụ soro usoro mgbatị ahụ siri ike. Mgbe ụfọdụ, ụdị mmega ahụ a haziri ahazi nwere ike bụrụ nke kacha atọ ụtọ, dịka ịgagharị n'èzí dịka ọmụmaatụ. Mmega ahụ kwa ụbọchị na-eme ka ị nọrọ n'ọnọdụ anụ ahụ dị ukwuu site na ime ka akwara gị dị ike mana ọ na-enyekwara uche gị aka site n'ibelata nchekasị. Ugbu a ọ bụrụla ihe a na-eme kwa ụbọchị, ana m atụ anya mgbatị ahụ m na-eme kwa ụbọchị n'ihi na ọ bụ oge m ga-agbanyụ ụbụrụ ọrụ m, na-agagharị, na-adịkwa ka m mere ihe dị mma maka ahụ́ ike m,” ka Heidi Streeter, onye malitere. nke Ezumike St.
Na-eguzogide ụbọchị ọjọọ
Onye guzobere onwe ya aha ya bụ ụlọ ọgwụ na-eweghachi ntutu isi Jae Pak na-echetara maka mkpa ọ dị ijide onwe gị n'ụkpụrụ omume na uche dị elu; ọ na-adụ ọdụ ka ị belata ụbọchị ọjọọ gị na-adịghị arụpụta ihe site n'ịghara ikwe ka onwe gị nyefee onwe gị na negativity.
“Otu ụkpụrụ ndụ nke nyere m aka nke ọma bụ ndụmọdụ e nyere m n’otu oge ka m ghara ikwe ka ihe ọjọọ mee onwe m. N'ezie, a na-enwe mgbe niile siri ike ọnọdụ ị ga-slog site na mgbe ụfọdụ ndụ bụ ike zuru ezu na ị dị nnọọ chọrọ n'okpuru negativity, ma ọ bụ dee pụọ a dum ụbọchị mmetụta ala. Ma, chegodị otú ndụ ga-adị gị ma ọ bụrụ na i kwe ka ị mee ihe ọjọọ n’ụbọchị! Ọbụlagodi ikwe ka ụtụtụ gị ma ọ bụ akụkụ nke ụbọchị gị dị ka ụbọchị ọjọọ na-ebelata oge bara uru ị nwere ike ịnọ na-ekpori ndụ gburugburu gị. Ya mere, jiri ike gị niile guzogide ụbọchị ọjọọ wee họrọ obi ụtọ kama, "Jae Pak, Onye guzobere Jae Pak MD Medical.
Lekwasị anya na Nri
Dị nnọọ ka ịkwaga ahụ́ gị dị mkpa, otú ahụ ka inye ahụ́ gị nri na-eme ka ọ dị mkpa dị mkpa. 70% nke nri ndị America na-abụkarị nri edoziri; n'ihi na ọ dị mfe na ọ na-emekarị ịgbaso eziokwu a, ịkwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike n'uche maka ihe ndị ị na-etinye n'ime ahụ gị. Mgbe ụfọdụ inweta ihe oriri zuru oke na-achọ ime nhọrọ siri ike nke ịsị mba maka ụfọdụ nri na ịgbalịsi ike maka nhọrọ ndị ka mma. Onye nchoputa, onye isi ala, na onye isi imewe maka Unico Nutrition na-atụ aro ibute nri nri maka afọ 2022 ka mma.
"Ọ nwere ike ịdị egwu ma ọ bụrụ na ị leba anya n'eziokwu banyere mmadụ ole ndị America na-enweta vitamin na nri ndị ha chọrọ maka ahụike kacha mma. Ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-ada nke ọma inye onwe ha ihe ndị na-akwalite ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime anyị agaghị aghọta n'ezie ihe ijuanya dị n'azụ otú ụfọdụ ihe na-enyere anyị aka n'ime usoro ọrụ na ihe kpọmkwem ahụ anyị na-eme ka igbari nri, anyị nwere ike ịmụta otú e si eri nke ọma. Mee 2022 ka ọ bụrụ afọ oriri na-edozi ahụ, ma ị na-eri nri nke ọma ma ọ bụ na ị naghị eri nri. Ọ ga-adị mma ma ị lekwasị anya n'ịmụta ntakịrị banyere vitamin na mineral ndị dị mma na-arụ ọrụ dị mma na ahụ ike gị wee rụọ ọrụ iji hụ na ị ga-ezuru ha? N'agbanyeghị ọkwa ị nọ ugbu a, ị nwere ike ibute nri siri ike ụzọ. Ndị onwe gị ugbu a na ndị ga-eme n'ọdịnihu ga-ekele gị, "Lance Herrington, Onye nchoputa, CEO, na Onye isi nke imewe nke UNICO Nri.
Jiri ndị na-agba ume gbaa onwe gị gburugburu
Ndị mmadụ nọ na ndụ gị na-akpụzi ka ụwa gị si apụta, yabụ na ọnụnọ nke ndị gbara gị gburugburu na-enwe mmetụta. O nwere ike ịbụ na ị maara na ndị mmadụ nwere ike ịmalite ịmụta àgwà na àgwà nke ndị ha na-etinye oge kachasị, nke onyeisi oche na onye nchoputa nke MicrodermaMitt kwuru nwere ike imetụta àgwà ahụike nke afọ ọhụrụ gị.
“Ndụ dị mkpụmkpụ nke ukwuu iso ndị na-ekwesịghị oge gị nọrọ ọtụtụ ụbọchị. Ị maara ndị ha bụ; ị nwere ike na-enwe mmetụta ozugbo otu ha siri dọba gị n'ime nsị na adịghị mma. Oge gị bara uru, dị oke ọnụ ahịa kwesịrị iji naanị ndị na-ebuli gị elu ma na-agba gị ume na ndị ga-anọ ebe ahụ n'oge oge kachasị ike gị. Ị maara okwu ahụ bụ 'ị bụ onye gị na ya na-anọkọ' ma ọ bụ eziokwu. Ka ị na-anọkwu oge gị na ndị na-anaghị egosipụta ụdị onye ịchọrọ ịbụ, ka ị na-ewepụtakwu oge ka ị bụrụ ezigbo onwe gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ 2022 ahụ ike, ịkwesịrị ịkpachara anya maka onye ị na-ahapụ ịbanye na oghere gị, "Judy Nural, Onye isi ala na onye guzobere MicrodermaMitt.
Mepee Ndụ Gị Maka Ọhụrụ
Onye nchoputa na onye isi oche nke azụmahịa nchekwa akpa Bounce na-atụ aro ka ị mepụta ndụ maka onwe gị nke na-enye ohere ịnwale ihe ọhụrụ. Ụwa gị nwere ike ịba ụba nke ukwuu mgbe ị meghere uche gị maka ahụmịhe na ohere ọhụrụ.
“Otu akụkụ nke ndụ nke na-eweta obi ụtọ na mkpali bụ ịchụso ahụmịhe ọhụrụ. Kama ịnọ n'otu ebe n'ihi na ahụla gị nke ọma ma ọ bụ chọta usoro na-arụ ọrụ maka gị, ọ dị mkpa ikwe ka onwe gị nwalee ihe ọhụrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ idobe onwe gị na mkpịsị ụkwụ gị site n'ịchọgharị ụzọ ọhụrụ mgbe niile, ndụmọdụ m kacha mma maka gị bụ ka ị ghara ịtụ egwu ịhụ na ịnwale ihe ọhụrụ. Bụrụ onye na-akpali akpali na 2022!" kwuru Cody Candee, Onye guzobere na CEO nke ibiaghachi.
Nwee ụra zuru oke
Echefula mkpa ọ dị ị rahụ ụra nke ọma! Ndị ọkachamara ahụike na-atụ aro ka ị na-ehi ụra ma ọ dịkarịa ala awa asaa kwa abalị maka ịrụ ọrụ nke uche na nke anụ ahụ kacha mma. Ị nwere ike nweta mmetụta ọjọọ nke ịla n'iyi ọbụna awa ole na ole ihi ụra ozugbo n'echi ya, nke mere na onye isi ụlọ ọrụ Healist Naturals na-adụ ọdụ ka onye ọ bụla na-ebute ụra ụra na 2022.
"Iji hụ na afọ dị mma na 2022, ị ga-ebu ụzọ nweta ụra zuru oke. Echere m na ọtụtụ mgbe ndị mmadụ anaghị aghọta oke ọrụ dị mkpa ụra na-arụ na ndụ anyị; mgbe ị na-ehi ụra nke ọma n'abalị ma e jiri ya tụnyere ịrahụ ụra nke ọma karịa ka ahụ gị chọrọ ị na-enweta ume dị elu, nghọta nke uche, ọnọdụ dị mma na anya, na ịrụ ọrụ nke ọma n'ime usoro. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ọ gaghị eche maka ụra dị ka ịnọ n'elu ebumnuche gị maka 2022, cheta na ị nwere ike ịkele ọkwa ụra dị mma maka ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịchọrọ ime na 2022: mmepụta ahụ ị chọrọ inweta na ọrụ? Ị nwere ike ịkele ezigbo ụra abalị maka nghọta echiche gị na ịkwọ ụgbọala. Oge a na-atụ aro ka ihi ụra karịrị asaa n'abalị, yabụ gbaa mbọ hụ na ị na-ahazi ụbọchị gị ka ị nwee ike ịrahụ ụra nke ọma, "ka Sarah Pirrie, Onye isi ụlọ ọrụ Brand na-ekwu. Ndị Ọgwụ Ọgwụ.
Na-agụ nke ọma
Dylan Arthur Garber, onye na-arụkọ ọrụ nke ụlọ ọrụ enyemaka ntị Audien Hearing na-atụ aro ka ị wepụta oge maka ịgụ akwụkwọ iji gbasaa ihe ọmụma gị ma nye gị ngwá ọrụ ị chọrọ iji kwalite ọganihu onwe gị.
“E nwere enweghị ngwụcha ego nke mmelite onwe onye na onwe akwụkwọ n'ebe na ahịa ugbu a, ma oge ochie nke onwe imezi ubi na ọhụrụ releases. Ana m akwado nke ukwuu na onye ọ bụla chọrọ ịgbanwe ndụ ya ma mepụta ezi omume were ohere ozi bara ụba nke dị ugbu a. Ị gaghị ejedebe onwe gị na ụdị enyemaka onwe gị, ma ọ bụ ọbụna na-abụghị akụkọ ifo; akụkọ ifo nwekwara ike ịbụ ọmarịcha ụzọ mgbapụ. A sị ka e kwuwe, ụzọ kachasị mma isi mee ka ọgụgụ isi pụta bụ site n'ịgụ nke ọma, "Dylan Arthur Garber, Onye-guzobere nke ụlọ ọrụ kwuru. Ntị Audien.
Wepụta oge gị na ndị ị hụrụ n'anya
Ndị otu azụmaahịa na microbiome boosting soda brand OLIPOP ji mkpa ọ dị iwulite ndụ nke ndị ị hụrụ n'anya gbara gị gburugburu. Àgwà bụ nzọụkwụ na-arụsi ọrụ ike nke ị na-eme ruo mgbe ọ ga-abụ ihe na-emekarị, nke mere na ị nwere ike ịdị na-akpachapụ anya maka iwepụta oge gị na ndị ị hụrụ n'anya iji mee ka ha bụrụ akụkụ nke ndụ gị mgbe niile.
“Omume ndụ dị mma bụ iwepụta oge ka gị na ndị ị hụrụ n'anya na-anọkọ. Ọ dịghị onye maara gị, na-akwado gị, na-agba gị ume, ma na-aza gị ajụjụ dị ka ndị hụrụ gị n'anya, ya mere, itinye ha na ndụ gị abụghị naanị omume ịhụnanya kamakwa ọ bụkwa ụzọ siri ike iji hụ na ị na-anọgide na-aga n'ihu ịghọ onye kachasị mma. "Steven Vigilante, Onye isi nke mmepe azụmaahịa ọhụrụ, na Melanie Bedwell, onye njikwa azụmaahịa e-commerce kwuru OLIPOP.
Tinye protein zuru oke n'ime nri gị
Jeff Goodwin, onye isi ahịa ahịa na e-azụmahịa nke ụlọ ọrụ nri dị ọcha Orgain gosipụtara mkpa ọ dị ịnweta protein zuru oke na nri gị.
"Na Orgain anyị kwenyere na ike nke ezigbo nri na-edozi ahụ dị ọcha nwere ike inyere gị aka ibi ndụ dị mma ma dị mma, nke mere anyị ji agba onye ọ bụla ume itinye protein zuru oke dịka akụkụ nke nri ha; ọ dịghị mkpa ka ọ sie ike inweta protein zuru ezu na ntụ ntụ, maa jijiji, na nnọchi nri anyị. Protein bụ ihe na-ahụ maka ime ka ahụ ike gị sikwuo ike, ịrụzi anụ ahụ gị, na ịkwalite ahụike ọkpụkpụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdị mma na 2022 n'ezie ahapụla ọkwa protein gị, "ka Jeff Goodwin, Sr. Director and Performance Marketing & E-Commerce Director nke na-ekwu. Ibido.
Soro Ụdị Ọrụ Ngwakọ
Mgbe ụfọdụ ilekọta onwe gị nke ọma na-adị ka inye onwe gị mgbanwe karịa iwepụta 'oge' n'ụbọchị ọrụ. Onye isi oche nke nri ndị pụtara ìhè na-atụ aro ka ị hapụ nke a ka ọ dị ka ịgbaso ụdị ọrụ ngwakọ ka enwere oge zuru oke maka ọrụ na izu ike na-enweghị ihe ọgbaghara.
"Ịgbakwunye nlekọta onwe onye n'ime oge ọrụ gị nwere ike ime ka afọ 2022 dị mma. Iwepụta oge bara uru maka onwe gị n'ụbọchị ọrụ nwekwara ike ime ka ị na-arụpụtakwu ihe. M na-atụ aro ka ị nwaa ụdị ọrụ ngwakọ. Enwere ike ịnwe 'isi elekere' na ụlọ ọrụ gị site na 12 ruo 4 ebe ndị ọrụ na-abata n'ọfịs, na-ekwe ka ndị otu zuru ezu nọrọ ebe ahụ maka nzukọ ihu na ihu na imekọ ihe ọnụ, wee kwe ka ha rụọ ọrụ site n'ụlọ, na-eme nke ha. hazie maka ụbọchị ọrụ ha fọdụrụ. Nke a na-enye gị na ndị otu gị aka ịmepụta nguzozi n'ọrụ na ndụ nke ga-enyere onye ọ bụla aka ịnọgide na-arụpụta ihe yana ahụike," Bill Glaser, CEO nke ụlọ ọrụ kwuru. Nri pụtara ìhè.
Gee ntị na akwụkwọ ọdịyo iji duzie njem nkeonwe gị
Otu n'ime ụzọ kachasị mma isi gbanwee ndụ gị ma gbanwee echiche gị bụ ịtụgharị uche na amamihe amamihe na ahụmahụ ndụ nke ndị ọzọ nwere nka. Akwụkwọ enyemaka onwe na nkwalite onwe onye bụ ụzọ magburu onwe ya isi nweta ngwaọrụ ndị ị chọrọ iji mee mgbanwe ndị dị mkpa na ndụ gị. Ma ebe ọ bụ na ị na-arụsi ọrụ ike ma nwee ike ọ gaghị enwe oge iji nọdụ nke ọma na akwụkwọ dị mma, onye na-arụkọ ọrụ na onye nduzi nke ọrụ na Digital Third Coast na-akọwa otú akwụkwọ ọdịyo nwere ike isi dabara na ndụ gị n'oge dị ala dịka mgbe ị na-anya ụgbọ ala.
“M na-eji ihe dị ka nkeji iri anọ na ise na-akwọ ụgbọala na-aga ọrụ kwa ụbọchị. Enwere m ike iji oge ahụ na-ege egwu ma ọ bụ na-ekwu okwu redio, mana m na-ahọrọ iji ya na-ege akwụkwọ azụmahịa na akwụkwọ nkwalite onwe onye. N'ime afọ abụọ na ọkara gara aga, egewo m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akwụkwọ ọdịyo 45. Akwụkwọ ndị a enyela m nghọta na-enweghị atụ banyere otu m ga-esi na-azụ ahịa na ịmụba nkà m. Enwere m ike ige akwụkwọ ọhụrụ n'ime ụbọchị ole na ole, gụnyere ịgụ akwụkwọ, nke ga-ewe m ma ọ dịkarịa ala otu ọnwa ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ogologo oge, n'ihi na ụmụaka abụọ nọ n'ụlọ, enweghị m ike ịchọta oge," George na-ekwu. Zlatin, Co-guzobere na onye isi ọrụ na Digital Coast nke atọ.
Cheta na ị ga-enwe ekele
Nlekọta onwe onye siri ike na-agbadata n'uche gị n'ihi na otú i si eche echiche na-emetụta mmetụta gị. Ka ị bụrụ ụdị nke onwe gị kachasị na-arụpụta nke ọma, onye isi oche nke SnoopWall na-atụ aro ka ị jiri ekele malite ụbọchị ahụ.
"M na-eteta ma na-amalite kwa ụbọchị site n'otu echiche mbụ: inwe ekele maka ụbara nke ndụ m -ezinụlọ, enyi, ụlọ ọrụ, na ndị ọzọ. Ọ dịghị ihe dị mma na-abịa ngwa ngwa. Ịrụsi ọrụ ike na nraranye na-akwụ ụgwọ mgbe niile. Malite kwa ụbọchị site na echiche siri ike, nke ziri ezi bụ ụzọ kacha mma isi malite ụbọchị ọ bụla. Ekwenyere m na echiche ziri ezi bụ isi ihe iji merie ihe mgbochi niile, ana m agbasa nke a na ndị otu m. Dị nnọọ ka negativity na-efe efe—chee echiche: otu apụl rere ure na ala nke gbọmgbọm ga-emebi ha nile—otu aka ahụ bụ positivity. Họrọ inwe ezi uche. Buru n'uche àgwà gị na otú o si emetụta ndị ọzọ, "ka Gary Miliefsky, CEO nke SnoopWall.
Nye onwe gị ndụ onye ị chọrọ ịghọ
Lauren Kleinman, onye nchoputa nke ikpo okwu nkwanye ngwaahịa The Quality Edit, na-atụ aro na ụzọ ị ga-esi nweta ahụike 2022 na gaba gawa bụ site n'ịgbalịsi ike n'ebe onye ịchọrọ ịbụ na ndụ ịchọrọ ibi.
"Ndụmọdụ m kacha mma maka igosipụta onye ị chọrọ ịbụ na ndụ ị chọrọ inwe n'ọdịnihu bụ igosipụta onwe gị ugbu a dị ka onye ịchọrọ ịbụ otu ụbọchị. M na-adụ ọdụ ka ị nọdụ ala ma mepụta nkọwa zuru oke nke onwe gị ma na-arụ ọrụ kwa ụbọchị ka ị bụrụ ụdị ahụ site n'igosi ihe oyiyi ahụ ugbu a. Nkọwa ọ bụla nke ndụ gị kwesịrị ịkwado onwe gị n'ọdịnihu ka ị na-azụlite ndụ nke mmụọ nsọ iji nweta; site n'ụzọ ị si emepụta ọdịdị gị ruo na nhọrọ nri ị na-eme ruo n'ihe ọgụgụ ị họọrọ, buru ụdị ndụ gị kachasị n'uche," ka Lauren Kleinman, Onye rụpụtara ya na-ekwu. The Quality Edit.
Site na ndụmọdụ ndị ọkachamara ndị a maka otu ị ga-esi bulie àgwà ndụ nke onwe gị, ị kwesịrị ịdị njikere ịbanye n'afọ ọhụrụ jupụtara na ekele, positivity, nduzi, na nlekọta onwe gị. N'agbanyeghị na ọ nweghị onye nwere ike ibu amụma ọnọdụ nke ụwa dị n'èzí ma ọ bụ ihe omume ị ga-ezute na 2022, ị nwere ikike niile n'ụwa ka ị họrọ ilele na ijikwa ndụ gị. Ejila nkeji ọzọ nọrọ n'ụjọ ma ọ bụ mgbagwoju anya; kama, tinye ndụmọdụ ndị a kachasị elu n'ime usoro ihe omume gị wee hụ ka ndụ gị gbanwere maka mma. Na ozi ọma: ịkwesighi ichere ruo Afọ Ọhụrụ iji mepụta àgwà ahụike. Gịnị ma ị malite taa?